(၃၁)နှစ်ပြည့်တော့မယ့် ၀တ်မှုံရွှေရည်အတွက် မိုးစက်ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးလုပ်ပေးကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….. - Zeekwat Hot News
(၃၁)နှစ်ပြည့်တော့မယ့် ၀တ်မှုံရွှေရည်အတွက် မိုးစက်ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးလုပ်ပေးကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…..
August 8, 20190351
၀တ်မှုံရွှေရည်ကတော့ ပရိသတ်တွေက ရွှေကစ် ဆိုပြီးချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ အကယ်ဒမီ မင်းသမီးချောလေးပါ။ (၁၉၈၈) ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။၀တ်မှုံရွှေရည်ကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဘီလီယံ နာဖြစ်နေတဲ့ Kylie Jenner နဲ့ မွေးနေ့ အတူတူပါ။Kylie ကိုလည်း သြဂုတ် (၁၀)ရက်နေ့မှာပဲ မွေးတာဖြစ်ပြီး Kylie ကတော့ ဒီနှစ်မှာ အသက် (၂၂)နှစ်ပြည့်မှာပါ။မကြာခင်မှာ အသက် (၃၁)နှစ်ပြည့်တော့မယ့် ၀တ်မှုံရွှေရည်ကတော့ မွေးနေ့ အကြို Birthday Party လေး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Photo : Wai Min Maung fb
Photo : San Win Oo fb
၀တ်မှုံရွှေရည်ရဲ့ မွေးနေ့အကြို Pre Birthday ပါတီ ပွဲလေးကိုတော့ သူမကို ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ တွေနဲ့ အတူ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုတော့ ကိုဝေမင်းမောင်၊Haw ၊အောန်ဆိုင်း၊မိုးစက်ဝိုင်၊M ဆိုင်းလု၊Ah- Boy ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊Bo San ..အစရှိတဲ့ ၀တ်မှုံရွှေရည်ကို ချစ်တဲ့ သူတွေ အများကြီး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရွှေကစ်ကို ချစ်တဲ့ သူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ Fb စာမျက်နှာပေါ်မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်း စကားတွေ ဆိုိထားကြပါတယ်။ဒီပွဲကို တက်ရောက် ခဲ့တဲ့ မိုးစက်ဝိုင်ကတော့ သူမရဲ့ Fb စာမျက်နှာပေါ်မှာ ၀တ်မှုံရွှေရည် အတွက် အခုလို မွေးနေ့ ဆုတောင်း ပေး ခဲ့ပါတယ်။
“Happy birthday daw kit Ellie Leo Leona . Tha Nge chin . Happiness isaprocess of living with the troubles you enjoy dealing with . I wish uavery happy year ahead !
Photo : Moeset Wine fb
၀တ်မှုံရွှေရည်ကိုတော့ (၁၉၈၈)ခုနှစ် သြဂုတ် (၁၀)ရက်နေ့က မွေးကုတ်မြို့မှာ ဦးဝင်းသိန်းနိုင်နဲ့ နန်းမီမီ လွင် တို့က မွေးဖွေးခဲ့ကြတာပါ။မွေးချင်းညီမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူမရဲ့ ညီမလေးကတော့ နဒီရွှေရည်ပါ။၀တ်မှုံရွှေရည် ကတော့ ကေSt.Augustine ကျောင်းမှာ တက်ရောက်ခဲ့သူပါ။တက္ကသိုလ်ကတော့ ဒဂုံကနေ English မေဂျာနဲ့ ဘွဲ့ ရထားသူပါ။အကယ်ဒမီဆု နှစ်ဆုကို ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး တစ်ဆု ကတော့ ဇာတ်ပို့ဆုဖြစ်ပြီး ဇာတ်ဆောင် ဆုကိုတော့ နင်စေ ရင် ဇာတ်ကားနဲ့ (၂၀၁၃)ခုနှစ်က ရခဲ့တာပါ။
Source : Moe Set Wine fb
Photo : Moe Set Wine fb
ဝတမွှုံရှရညကွေတော့ ပရိသတတွှကေ ရှကစွေ ဆိုပှီးခစှစွနိုးခေါကွှတဲ့ အကယဒွမီ မငွးသမီးခှောလေးပါ။ (၁၉၈၈) ခုနှစွ သှဂုတလွ (၁၀) ရကနွမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့တာပါ။ဝတမွှုံရှရညကွေတော့ အသကငွယငွယလွေးနဲ့ ဘီလီယံ နာဖှစနွတေဲ့ Kylie Jenner နဲ့ မှေးနေ့ အတူတူပါ။Kylie ကိုလညွး သှဂုတွ (၁၀)ရကနွမှေ့ာပဲ မှေးတာဖှစပွှီး Kylie ကတော့ ဒီနှစမွှာ အသကွ (၂၂)နှစပွှညွ့မှာပါ။မကှာခငမွှာ အသကွ (၃၁)နှစပွှညွ့တော့မယွ့ ဝတမွှုံရှရညကွေတော့ မှေးနေ့ အကှို Birthday Party လေး ကငွှးပခဲ့ပါတယွ။
ဝတမွှုံရှရညရွေဲ့ မှေးနအေ့ကှို Pre Birthday ပါတီ ပှဲလေးကိုတော့ သူမကို ခစှတွဲ့ သူငယခွငွှးမိတဆွှေ တှနေဲ့ အတူ ကငွှးပခဲ့ပါတယွ။ဒီပှဲကိုတော့ ကိုဝမငွေးမောငွ၊Haw ၊အောနဆွိုငွး၊မိုးစကဝွိုငွ၊M ဆိုငွးလု၊Ah- Boy ၊ အိနဒြှာကှောဇွငွ ၊Bo San ..အစရှိတဲ့ ဝတမွှုံရှရညကွေို ခစှတွဲ့ သူတှေ အမှားကှီး တကရွောကခွဲ့ကှပါတယွ။ရှကစကွေို ခစှတွဲ့ သူတှကလညွေး သူတို့ရဲ့ Fb စာမကှနွှာပေါမွှာ မှေးနဆေု့တောငွး စကားတှေ ဆိုထားကှပါတယွ။ဒီပှဲကို တကရွောကွ ခဲ့တဲ့ မိုးစကဝွိုငကွတော့ သူမရဲ့ Fb စာမကှနွှာပေါမွှာ ဝတမွှုံရှရညွေ အတှကွ အခုလို မှေးနေ့ ဆုတောငွး ပေး ခဲ့ပါတယွ။
ဝတမွှုံရှရညကွေိုတော့ (၁၉၈၈)ခုနှစွ သှဂုတွ (၁၀)ရကနွကေ့ မှေးကုတမွှို့မှာ ဦးဝငွးသိနွးနိုငနွဲ့ နနွးမီမီ လှငွ တို့က မှေးဖှေးခဲ့ကှတာပါ။မှေးခငွှးညီမတစယွောကရွှိပါတယွ။သူမရဲ့ ညီမလေးကတော့ နဒီရှရညပွေါ။ဝတမွှုံရှရညွေ ကတော့ ကေSt.Augustine ကှောငွးမှာ တကရွောကခွဲ့သူပါ။တကကြသိုလကွတော့ ဒဂုံကနေ English မဂှောနဲ့ ဘှဲ့ ရထားသူပါ။အကယဒွမီဆု နှစဆွုကို ရရှိထားသူဖှစပွှီး တစဆွု ကတော့ ဇာတပွို့ဆုဖှစပွှီး ဇာတဆွောငွ ဆုကိုတော့ နငစွေ ရငွ ဇာတကွားနဲ့ (၂၀၁၃)ခုနှစကွ ရခဲ့တာပါ။
ဘုရားမှာ ရိုက်တဲ့ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုအပေါ် ပိုးမမှီသာ ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်….
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို အမြစ်ဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ သင်္ဘောရွက်အကြောင်းကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်…..